FORTNITE UKUZA KWININTENDO TSHINTSHELA NGOMSO - IKOTA
I-Fortnite ixelwe ukuba iza kwiNintendo Shintsha Ngomso
Umnqamlezo weqonga lomlo royale phenomenon Fortnite ’ Ukubonakala kwiNintendo Shintsha kudala kulindelwe kwaye, ukuza kuthi ga ngoku, kukho amarhe kwaye avuza okuninzi, kodwa abanini beSwitch bashiywe benemibuzo malunga nohlobo lweconsole yabo, kubandakanya nomhla wokukhutshwa kwayo. Ngoku, enkosi kwimigodi yedatha, kubonakala ngathi ukumangaliswa (okushiyekileyo kuyo) kuye kwavuthelwa.
Ixesha 1 ilivo lekorra
Kwangentseni yanamhlanje, USimon Aarons uthumele umfanekiso-skrini ye Amashumi amane idatha etsalwe kwiiseva zeNintendo ze-eShop ( ngaphezulu apha , kunye umfanekiso wekhusi kanye kwiserver yeNintendo apha ) njengoko belungiselela ukukhutshwa komdlalo. Idatha ibandakanya umhla wokukhutshwa, ofunda uJuni 12, 2018-aka. umhla wentetho yeNintendo yeNokia E3 ngomso. Ngelixa uhlelo lweNintendo Direct E3 2018 lucwangciselwe ikakhulu ukugxila kulo KwiSmash Bros. , kubonakala ngathi sisibhengezo esothusayo kunye nokumiliselwa ngaxeshanye Amashumi amane bekucwangcisiwe, kodwa kunzima ukugcina izinto ezinjalo zisongelwe kwezi ntsuku.
Utshintsho liqonga elikhulu lesihloko, ithini ngeconsole / imeko ye-hybridi ephathwayo kunye nokuthandwa kokudlala Amashumi amane naphina kwaye naphina, kuyo nayiphi na into enokudlala umdlalo wevidiyo. Ikwayintshukumo entle yeNintendo ukwamkela into enkulu kangaka yeqela lesithathu, njengoko iqhinga labo lokugcwalisa iTshintsho ngeetoni zemidlalo liqhubeka. Inkampani iyasokola ngokwembali ngenkxaso yeqela lesithathu, ngaphandle kwezithembiso zabo eziphindaphindiweyo zokuphucula izinto, ezihlala zibashiya bexhomekeke kumandla amakhulu eepropathi zabo ezingaphakathi endlwini.
Baye baba ndlongondlongo ngakumbi ngoTshintsho kumacala omabini ukuza kuthi ga ngoku, kwaye kubonakala ngathi kuyasebenza. Kukho okungakumbi okuza kutyhilwa malunga notshintsho lwenguqu yomdlalo kwi-E3, kunye namandla okudlala eqongeni kunye neendlela ezahlukeneyo zemidlalo ezisemoyeni. Ukubamba zonke iinkcukacha kuloo nto, kunye nayo yonke enye into eza kuTshintsha kungekudala, uya kufuna ukubamba ingcaciso ye-E3 yeNintendo ngomso, ethi unokwenza apha .
Iingoma zengoma yomthetheli wengoma
(nge INintendo yaseJapan kwi-Twitter , umfanekiso: Imidlalo ye-Epic)
Kutheni caillou unempandla meme
umnxeba womsebenzi wokulwa imfazwe
ukuba ndiphinde ndisebenzise iakhawunti yam ye-facebook
eowyn nkosi yemisesane
amakhwenkwe alungileyo eemfazwe